एम्सको अवसर छाडेका डा. गिरी वीपीका उपकुलपति नियुक्त, प्रतिष्ठानको गरिमा अझ बढाउने प्रतिक्रिया :: Nepal Post Dainik एम्सको अवसर छाडेका डा. गिरी वीपीका उपकुलपति नियुक्त, प्रतिष्ठानको गरिमा अझ बढाउने प्रतिक्रिया | Nepal Post Dainik
काठमाडौं, २८ फागुन । धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा. ज्ञानेन्द्र गिरीलाई नियुक्त गरेको छ ।
देशमा नै स्वास्थ्य सेवामा योगदान गर्न २४ बर्षअघि देखि नै ठूला अवसर त्याग गरेका गिरीलाई वीपीको नेतृत्व दिइएको हो ।
नवनियुक्त उपकुलपति गिरीले प्रतिष्ठानको गरिमा बढाउनका निम्ति आफूले अनुभव, सीप र क्षमतालाई शतप्रतिशत लागू गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । गिरी बिराटनगर निवासी हुन् ।
सन् १९९८ अमेरिकाको कोलोराडोस्थि इस्टिच्युट अफ हेल्थ एन्ड साइन्समा पनि प्राध्यापकका रूपमा अनुभव बटुलेका गिरी हाल भने विराट मेडिकल कलेजमा प्रोफेसर र मेडिकल डिपार्टमेन्ट प्रमुखका रुपमा कार्यरत थिए ।
बिराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजको स्थापना गर्न पनि उनको ठूलो योगदान र भूमिका रहेको छ । स्थापना भएको ५ बर्ष्भित्र नै उनलाई पूर्वाग्रहका आधारमा सुनिल शर्माले अपहरण गर्न लगाएर शेयर फिर्ता गराएका थिए ।
राजनीतिक रूपमा नेपाली कांग्रेसमा असुरक्षित भएपछि डा. गिरी तत्कालिन एमाले अध्यक्ष तथा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमार्फत कम्युनिस्टको छहारीमा आएका थिए ।दैनिक नेपाल